eHimalaya Online || News from nepal » जब ऐश्वर्या रायले अभिषेक बच्चनलाई बेडरुमबाट बाहिर नि,कालिदिइन बि,चरा अभिषेक दुई दिनसम्म…………..!
२०७८ पुस २९ गते बिहिबार || 2022 Jan 13 Thursday
जब ऐश्वर्या रायले अभिषेक बच्चनलाई बेडरुमबाट बाहिर नि,कालिदिइन बि,चरा अभिषेक दुई दिनसम्म…………..!
२०७८ पुस ६ गते मङ्गलबार ०४:५९
पावर कपल भनेर चिनिने अभिषेक बच्चन र ऐश्वर्या इन्डस्ट्रीमा यी दुईबीच कहिल्यै झ,गडाको खबर आएन र छु,ट्टिएको खबर पनि आएन,तर तपाईं नसोच्नुहोस यी दुईबीच कहिल्यै झ,गडा भएको छैन । अन्य जोडीहरु जस्तै उनीहरुको पनि झ,गडा हुन्छ, जसलाई अभिषेक...
पावर कपल भनेर चिनिने अभिषेक बच्चन र ऐश्वर्या इन्डस्ट्रीमा यी दुईबीच कहिल्यै झ,गडाको खबर आएन र छु,ट्टिएको खबर पनि आएन,तर तपाईं नसोच्नुहोस यी दुईबीच कहिल्यै झ,गडा भएको छैन । अन्य जोडीहरु जस्तै उनीहरुको पनि झ,गडा हुन्छ, जसलाई अभिषेक बच्चनले स्विकारेका छन् । के तपाईलाई थाहा छ एक पटक अभिषेकको एक कर्मबाट ऐश्वर्या त्र,सित भइन् र उनले आफ्ना श्रीमानलाई दुई रातसम्म बेडरूमबाट बाहिर नि,कालिदिइन । त्यसपछि अभिषेकले हलमै रात बिताउनु परेको थियो ।
इंडस्ट्रीमा धेरै कम जोडी छन् जसले आफ्नो विवाहलाई मानिसहरूका लागि उदाहरण बनाएका छन्। यस लिस्टमा ऐश्वर्या र अभिषेकको नाम पनि छ । विश्व सुन्दरी बनेकी ऐश्वर्याले सन् २००७ मा मेगास्टार अमिताभ बच्चनका छोरा अभिनेता अभिषेक बच्चनसँग विवाह गरेकी थिइन् । उनीहरुको विवाह भएको धेरै वर्ष भइसक्यो तर आज पनि उनीहरुबीचको प्रे,म पहिलेको जस्तै रहेको छ । दुबैलाई उद्योगको पावर जोडी भनिन्छ। विवाहदेखि नै जीवनको हरेक उ,तार च,ढावमा दुवैले एकअर्कालाई साथ दिन्छन् ।
वास्तवमा यो कुरा सन् २०१४ को हो । त्यसबेला अभिषेक आफ्नो कबड्डी टोलीको तालिमका लागि चेन्नईको सत्यभामा विश्वविद्यालय गएका थिए । त्यहाँ उनले विश्वविद्यालयका संस्थापक कर्नल जेपीआईआरलाई भेटे। उनको कार्यालय निकै सानो थियो । उनको अफिसमा दुई चार कुर्सीबाहेक एउटा डेस्क थियो । अरु केही थिएन।
अभिषेक बच्चनले देखे कि कर्नल जेपीआईआरले आफ्ना सबै ट्रफीहरू भुइँमा राखेका थिए। यो देखेर अभिषेक बच्चन निकै छ,क्क परे । यस्तो अवस्थामा उनले कर्णेल जेपीआईआरलाई सोधे कि उनले आफ्नो ट्रफी किन भुइँमा राख्छन्? कर्नेल जेपीआईआरले यसबारे जे भने, त्यसबाट अभिषेक बच्चन निकै प्रभावित भए । जित र यो अवार्डको न,शा आफ्नो टाउकोमा नजाओस् भनेर यस्तो गरेको उनले बताए । कर्णेलका यी कुरा सुनेर अभिषेक निकै प्रभावित भए।
यस्तो अवस्थामा अभिषेक बच्चनले पनि आफ्नो घरमा यस्तै गर्ने सोचेका थिए । उनले आफ्नो र ऐश्वर्याको सबै ट्रफी भुइँमा सजाइएका थिए । उनको पूरै कोठा ट्रफीले भरिएको थियो। तर जब ऐश्वर्या कोठामा आइन्, यो सबै देखेर उनी रि,सले रातो भइन् । यसबारेमा अभिषेकले एक अन्तर्वार्तामा भने, ‘मैले ऐश्वर्यालाई ट्रफी भुइँमा राख्नुको कारण पनि भनेँ तर उनी यति रि,साएकी थिइन् कि उनले मलाई सिधै बेडरुमबाट बाहिर नि,कालिदिइन । ऐश्वर्याको रि,सका कारण दुई रात कोठा बाहिर हलमा बस्नुपरेको थियो ।
प्रकाशित मिति २०७८ पुस ६ गते मङ्गलबार ०४:५९
बिहेपछि कट्रीना कैफ झा,डु पोछामा व्यस्त, भिडियोसहित।
बढ्दो उमेरसँगै मलाइकाको हट एन्ड बोल्ड शैलीको चर्चा हेरौ १३ तस्बिरमा ।
२०७८ पुस २८ गते बुधबार ०८:४१
२०७८ पुस २८ गते बुधबार ०२:०६
२०७८ पुस २७ गते मङ्गलबार ०८:३९